» “यसरी गर्नुहोस् मात्र, रातो खुर्सानीको प्रयोग, वर्षिनेछ धन, आउनेछ, परिवारमा खुसि” “यसरी गर्नुहोस् मात्र, रातो खुर्सानीको प्रयोग, वर्षिनेछ धन, आउनेछ, परिवारमा खुसि” – हाम्रो खबर
हाम्रो खबर संबाद दाता 46 Views
“खुर्सानीलाई खानामा राख्दा यसले स्वाद बढाउने काम गर्छ। तपाईलाई थाहा छ ? रातो खुर्सानी खानलाई मात्र प्रयोग गरिदैन्। यसको प्रयोग तुनामुना तथा वास्तु शास्त्रमा पनि गरिन्छ। यदी कोही व्यक्तिमाथि कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भने रातो खुर्सानी मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। यदी तपाईको जीवनमा पनि कुनै समस्या आएको छ भने रातो खुर्सानीको सहयोगमा छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ।”
“आफू माथि आइपरेका ग्रह दशा हटाउनका लागि कसरी प्रयोग गर्ने त रातो खुर्सानी ? भन्ने बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिदैछौँ। यदी कुनै व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने एउटा कपडामा ५ वटा सुकेको रातो खुर्सानी बाँधेर आफू सुत्ने ओछ्यानको मुनी राख्नुहोस्। यसो गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हटेर जान्छन्।”
“यदी तपाईको परीवारमा कुनै बच्चालाई कसैको नजर लागेको छ भने पनि रातो खुर्सानीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। रातो खुर्सानीलाई हातमा लिएर पीडित बच्चाको माथि ७ पटक उल्टो क्रममा घुमाएर नजर उतार्नुहोस्।”
“त्यसपछि बलिरहेको आगोमा रातो खुर्सानीलाई फालिलिनुहोस्। यसो गर्दा जनरको प्रभाव हटेर जान्छ। यदी कुनै व्यक्तिलाई कार्य क्षेत्रमा बाधा आएको छ भने पनि रातो खुर्सानी निकै उपयोगी बन्न सक्छ। यसका लागि २१ वटा रातो खुर्सानीलाई एउटा पानीको भाँडोमा राख्नुहोस्। त्यसपछि उक्त पानीलाई ७ पटक आफ्नो माथि वार पार गरेर घर बाहिर सडकमा फ्यालिदिनुहोस्। यसो गर्दा कार्यक्षेत्रका बाधा हटेर जान्छन्।”
“यदी तपाईको घरमा आम्दानी छ तर पैसा टिक्दैन भने पनि रातो खुर्सानीबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि एउटा रुमालमा ७ वटा रातो खुर्सानी बाँधेर पैसा राख्ने स्थानमा लगेर राख्नुहोस्। यसो गर्दा पनि पैसा नटिक्ने समस्या हटेर जान्छ।”